News Collection: डबल बदनाम भएँ मः चपली हाइटकी नायिका बिनिता
डबल बदनाम भएँ मः चपली हाइटकी नायिका बिनिता
पछिल्लो समय नेपाली रजतपटमा नवनायिकाहरुको आगमन हुनेक्रम बढिरहेको छ । रजतपटमा प्रवेश भैसकेपछि जतिसक्दो एक्सपोज दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता लिएर कुनै पर्वाह नगरी नायिकाहरुले एक्सपोज गरेको कुराले कलिउड नगरीमा बेलाबेलामा सारगर्मी बढ्छ । कहिले न्युड फोटो त कहिले फिल्मबाट निकालिएको बिभिन्न कुरारुरले चर्चामा आइरहेकी ‘चपली हाइट डेब्यु‘ नायिका बिनिता बराल कलीउड नगरीमा यतिबेला निकै छाइरहेकी छन् । झन्डै पचासभन्दा बढी म्युजिक भिडियोहरुमा मोडलिङ गरिसकेकी बिनिता यतिबेला चैत्र ३ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको आफ्नो डेब्यु फिल्म चपली हाइटको प्रचारप्रसरमा ब्यस्त छिन् । उनै नायिका बिनितासँग एबीसीटिभी नेपाल डट कमका लागि शारदा थापाले गरेको कुराकानी..
कलिउड नगरीमा छाइरहनुभएको छ , हिजोआज केमा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
यही चैत ३ गतेबाट मेरो डेब्यु फिल्म चपली हाइट प्रदर्शन हुँदैछ ,मेरो बारेमा धेरै कुरा भएको छ, मैले गरेको कामको दर्शकहरुले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ मनमा ढुकढुकी बढीरहेको छ । हिजोआज रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिनेदेखि लिएर फिल्मको प्रचारप्रसारमै ब्यस्त छु ।
फिल्म प्रमोशनका लागि त तपाइसँगै काम गर्ने अरु हिरोहरु पनि छन् तर चर्चा तपाईँको मात्रै छ नि ?
हो, मसँगै काम गर्ने आमिर गौतम र राज घिमिरे हुनुहुन्छ तर जताततै माग मेरो छ । सबैले मलाई नै खोज्नुहुन्छ । सायद मेरो बारेमा आएको कन्ट्रोभर्सीले होला । बढी चर्चा र माग बढाउन कन्ट्रोभसी चाहिँदोरहेछ ।
तापाईको टपलेस फोटोको कन्ट्रोभर्सी के हो ?
उ त्यो टपलेस फोटो थिएन् मैले ईनर वेयर लगाएको थिएँ । त्यो फोटो मूभिका लागि भनेर खिचिएको फोटो थियो । तर एक्कासी म्यगजीन अनि पेपरहरुका कभरपेज बनेर आयो । जुन फोटोमा मैले लगाएको ईनर वेयर हटाइएको थियो । त्यतिबेला म सारेै निराश भएँ । मलाई केही थाहा थिएन, अनि पत्रकार सम्मेलन गरेँ । त्यसबाट झनै ठुलो स्क्यान्डल पो भयो ।
पत्रकार सम्मेलनका बेलामा त चपलीहाइटका निर्माता अर्जुन कुमार श्रेष्ठले अब बिनिता हाम्रो फिल्मको प्रचारप्रसारबाट आउट भन्नु भएको थियो नि ?
मैले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँहरु आउनु पनि भएन । उहाँले रिसको बेला भन्नु भयो होला । मसँग औपचारिक रुपमा केही भन्नु भएको थिएन् । फिल्मको मुख्य हिरोइनै मै हुँ म कसरी आउट हुन्छु र ? मलाई एउटा फिल्ममा एग्रीमेन्ट गराई एड्भान्स दिएर फिल्म सुटिङ हुने बेला निकालियो । तर मेरो हिरोइन बन्ने सपना बच्चैदेखि थियो । त्यस्तोबेलामा निर्माता अर्जुनकुमार श्रेष्ठ र निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले मलाई चपलीहाइटमा सोलो हिरोइनको रुपमा लिनुभयो, म कहिले भुल्न सक्दिनँ ।
चपली हाइट कस्तो फिल्म हो ?
सेक्स्युल साइकोलोजीमा आधारित फिल्म हो । यो फिल्मले एडल्ट सर्टीफिकेट पाएको छ । युवा जमातले अभिनय गरेको अनि योङ जेनेरेशनका लागि लक्षित गरी बनाइएको फिलम हो चपलीहाइट ।
तपाईको डेब्यु फिल्म चपलीहाईट, आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न कत्तिको गाहे भयो ?
मैले पचासभन्दा बढी मयुजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकै थिएँ । अनि हिरोइन बन्नका लागि नृत्य, अभिनय सबै सिकेको थिएँ । अभिनय गर्न सक्ने पूर्ण विश्वास थियो । तर चपलीहाइट यौन मनोविज्ञानमा आधारित भएकाले दृष्यहरु त्यस्तैखालको दिनुपर्ने थियो त्यतिबेला डाराएँ, अनि कति पटक रोएँ पनि तर मैले आफ्नो भुमिका राम्रेसँग निर्वाह गरेको छु ।
पहिलो फिल्मबाट ननिकालिएको भए बिनिताको हाइट चपलीहाइटलेजस्तै दिन्थ्यो होला ?
मलाई ‘के म तिम्रो साथी बन्न सक्छु’ भन्ने फिल्मबाट निकालेको हो तर धेरै राम्रो भयो । सायद चपलीहाइटले जति हाइट त्यो फिल्मले मेरा लागि दिदैनथ्यो ।
तपाईको ब्यक्तिगत जीवनमा के कस्तो असर पर्यो कन्ट्रोभर्सीले ?
असर धेरै प¥यो , बिनिताले त फिल्म खेल्नका लागि टपलेस फोटो खिचाई रे, सेक्सका धेरै कुरा गरेर हट बन्न खोजी रे कतिले तैँले विवाह गर्नुपर्दैन ? पनि भने । धेरै कुरा आयो मेरो परिवारले जुन कुरा सहन सकेन मेरो परिवार रुनु भनेकोनै मेरो पुरै जीन्दगी असफल हुनु हो , म त यहाँ डबल बद्नाम पो भएँ त । एक हिरोइन भन्ने बित्तिकै बदनाम हुने अर्को टपलेस फोटोले बद्नाम । म आफै कत्तिपटक फ्रस्टेशनमा परेँ । तर यि सब घट्नाले मलाई च्यालेन्ज दिएको छ आत्मबल बढाएको छ ।
अब के योजना छ बिनिताको ?
उ म रजतपटमा नायिका बन्छु भनेर आएको शुरुवतामै कन्ट्रोभर्सीले चर्चामा आएँ । म साधारण केटी हुँ । तर चपली हाइटमा यौनमनोविज्ञानको दमदार भुमिका निर्वाह गरेको छु । थुप्रै फिल्मको प्रस्ताव आइरहेको छ । अब चपलीहाइट रिलिज भएपछि फिल्मी करीयरलाई नै निरन्तरता दिन्छु ।
एबीसी टीभी नेपालबाट सभार